Liverpool oo isku diyaarineysa in Van Dijk ay ka sara mariso Maxamed Saalax – Gool FM
(Liverpool) 12 Juun 2020. Sida ay wararku sheegayaan daafaca reer Holland ee Virgil van Dijk ayaa noqon doono ciyaariyahanka ugu mushaarka badan taariikhda kooxda kubadda cagta Liverpool.
Virgil van Dijk ayey wararku sheegayaan inuu saxiixi doono heshiis cusub uu ku qaadan doono Toddobaadkii 220,000 pounds.
Wargayska “The Sun” ee dalka England ayaa sheegay in Virgil van Dijk uu heshiis 5-sano ah qalinka ugu duugi doono kooxda Liverpool, kaddib markii ay Reds qarka u saran tahay inay ku guuleysato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Wargayska ayaa sheegay in arrintan ay soo afjari doonto cabsida laga qabo in xiddiga reer Holland uu u dhaqaaqo kooxda Paris Saint-Germain, maadaama uu xiiso ka helayo.
Qandaraaska uu Virgil van Dijk haatan ku joogo kooxda Liverpool ayaa wuxuu ku helaa toddobaadkii mushaar dhan 180,000 pounds, waxaana suurtogal ah inuu noqdo mushaarkiisa Isbuucii 280,000 pounds hadii uu u dhaqaaqo St. Germain.
Sida ku xusan heshiiska cusub ee la rajeynayo inuu la galo kooxda Liverpool, Virgil van Dijk wuxuu ka sara mari doonaa ciyaaryahanka ugu mushaharka badan xilligan kooxda Reds, waana Maxamed Saalax kaasoo Isbuucii mushaar ahaan u qaata 200 kun oo pounds.